Yashi Mgbasa Ozi Video site na Geographic Region | Martech Zone
Ka ikiri vidiyo na-aga n’ihu na-ebili, enwere ohere ịbịaru ndị na-ege ntị akọwapụtara nke ọma site na iji usoro iche iche. Na Yashi, ụlọ ọrụ achụmnta ego nwere ike ịtọlite ​​oke ohere na lonjituudu na hazie okirikiri gburugburu ya, na-enye naanị ndị bi na mpaghara ahụ mgbasa ozi. Yashi ikike iweghachi ikike na-eme ka ọ dị mfe igosi mgbasa ozi gị nye ndị gaalarị na saịtị gị.
Yashi na-enyocha ihe karịrị ijeri nde 65 na otu ọnwa ma na-enye ndị mgbasa ozi ohere ịchọta nke dị n'ime echiche ndị ahụ ha chọrọ ịzụta site na iji usoro ichebe ahaziri iche dị iche iche. Usoro ndị a gụnyere iji data gbasara onye ọrụ ọ bụla enyere:
Izubere nke ejikọtara
Ichebe ihu igwe
Ngwaọrụ ezubere iche
Akara ejiji mba ama kpọpụtara Yashi ka o jee ozi mgbasa ozi vidiyo nke 15 nke abụọ, nke gbara ndị na-ekiri ume ịga otu n'ime ụlọ ọrụ 100+ nke Manhattan. Yashi gafere mkpọsa mkpọsa ahụ, na-ekwenye a 80.57% Ele Site na ọnụego (VTR) na 0.32% Pịa Site na ọnụego (CTR).
Usoro kachasị mkpa maka ịme atụmatụ bụ geotargeting. Ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ nwere oke ala, mana ọbụlagodi ụlọ ọrụ mba niile nwere ike irite uru site na mkpọsa ala. Yashi na-enyere aka ịchepụta obere okirikiri gburugburu otu ụlọ ahịa, koodu zip niile, DMA, State, mpaghara, ma ọ bụ mba ahụ dum.
Nkwupụta Yashi na-eme ka ndị ahịa nwee ike nyochaa arụmọrụ mkpọsa site na mpaghara, yana iji atụmatụ Zip Code nwekwara ike ịbụ ụzọ dị mma iji nyochaa ihe omume igwe mmadụ na-aza kacha mma.
Tags: mgbasa ozi ezubere ichegeolocategeolocationohereogologoyashi